Warar - Xirxirida Aqoonta Maadiga ah: Fahmaan astaamaha waraaqaha, kor u qaadista tayada Baakadaha iyo Daabacaadda
Abstract: Waraaqda ayaa ah tan ugu badan ee loo isticmaalo daabacaadda daabacaadda. Hanti ahaan jir ahaaneed waxay saameyn toos ah ama mid aan toos ahayn ku leedahay tayada daabacaadda. Fahamka saxda ah iyo hanashada nooca warqadda, iyadoo la raacayo astaamaha wax soo saarka, adeegsiga macquul ee warqadda si loo hagaajiyo tayada wax soo saarka daabacaadda, ayaa door wanaagsan ka ciyaari doonta dhiirrigelinta. Warqaddan si ay ula wadaagaan astaamaha ku jira warqadda la xiriirta, ee loogu talagalay asxaabta tixraaca:
Mid kasta oo ka mid ah noocyada kala duwan ee waraaqda daabacan ee leh sifooyin gaar ah, waxay kuxirantahay habka daabacaadda.
Waraaq si gaar ah loogu isticmaalo daabacaadda. Marka la eego isticmaalka waxaa loo qaybin karaa: joornaal cusub, buugaag iyo waraaqo xilliyeed, warqad dabool, warqad dammaanad iyo wixii la mid ah. Marka loo eego hababka daabacaadda ee kala duwan waxaa loo qaybin karaa warqad daabacan, warqad daabacan, xaashiyaha daabacaadda iwm.
Waxay loola jeedaa culeyska warqad halkii cutub, oo lagu muujiyey g / ㎡, taasi waa, miisaanka garaam ee warqad mitir laba jibaaran. Heerka xaddiga warqadda ayaa go'aamiya astaamaha jirka ee warqadda, sida xoogga siligga, heerka kalagoynta, adkaanta, qallafsanaanta iyo dhumucda. Tani sidoo kale waa sababta ugu weyn ee mashiinka daabacaadda xawaaraha sare ugu fiicnayn waraaqda tirada ee ka hooseysa 35g / ㎡, si ay u fududaato in loo muuqdo warqad aan caadi ahayn, lama oggola in dusha laga maro iyo sababo kale. Sidaa darteed, marka loo eego astaamaha qalabka, nidaaminta tirada ee qaybaha daabacaadda ee u dhiganta waxqabadkeeda waa la soo saari karaa, si si wanaagsan loo yareeyo isticmaalka, loo hagaajiyo tayada wax soo saarka iyo waxtarka daabacaadda ee qalabka.
Miyuu yahay dhumucda warqadda, halbeegga cabbirka waxaa badanaa lagu muujiyaa μm ama mm. Dhumucdiisuna iyo tirade iyo isafgaradku waxay leeyihiin xiriir dhow, guud ahaan, dhumucda xaashidu waa weyn tahay, tiradeedu waxay u dhigantaa mid sare, laakiin xiriirka labadooda ka dhexeeya ma ahan mid dhammaystiran. Waraaqaha qaar, in kasta oo ay khafiif yihiin, waxay la siman yihiin ama ka badan yihiin dhumucda. Tani waxay muujineysaa in cidhiidhiga qaabdhismeedka xajmiga xaashidu uu go’aamiyo tirada iyo dhumucda warqadda. Marka laga eego dhinaca daabacaadda iyo tayada baakadaha, dhumucda isku midka ah ee warqadda ayaa aad muhiim u ah. Haddii kale, waxay saameyn ku yeelan doontaa warqadda cusboonaysiinta tooska ah, cadaadiska daabacaadda iyo tayada khadadka. Haddii aad isticmaasho dhumucda kala duwan ee waraaqaha la daabacay, waxay ka dhigi doontaa buugga la dhammeeyay inuu soo saaro farqiga dhumuc weyn.
Waxay loola jeedaa culeyska warqad halkii sintimitir cubic, oo lagu muujiyey g / C㎡. Cidhiidhiga warqadda waxaa loo xisaabiyaa tirada iyo dhumucda iyadoo la raacayo qaaciddada soo socota: D = G / D × 1000, halkaasoo: G u taagan yahay tirada warqadda; D waa dhumucda warqadda. Cidhiidhiga ayaa ah cabirka cufnaanta qaabdhismeedka warqadda, haddii uu aad u dhagan yahay, dillaac waraaqo jajaban, madmadow iyo nuugista khadku si weyn ayaa loo yareyn doonaa, daabiciddu ma sahlana in la qalajiyo, waana sahlan tahay in la soo saaro ifafaale hoose oo wasakh ah. Sidaa darteed, marka warqad la daabacayo oo leh cidhiidhi sare, waa in fiiro gaar ah loo yeesho xakamaynta macquulka ah ee xaddiga xaddiga khadadka, iyo doorashada qalalan iyo khadadka u dhigma.
Miyuu yahay waxqabadka u adkeysiga waraaqda shey kale, laakiin sidoo kale waxqabadka xajmiga unugyada warqadda. Dareenka xaashida ayaa hooseeya, wuxuu heli karaa sumad cad oo dheeri ah. Nidaamka daabacaadda waraaqaha ayaa guud ahaan ku habboon daabacaadda warqad leh adkaansho hoose, sidaas darteed tayada khadadka daabacaaddu way wanaagsan tahay, heerka caabbinta saxanka daabacaadduna sidoo kale wuu sarreeyaa.
Waxaa loola jeedaa heerka warqadda kuuskuus ah, halbeeg ilbiriqsiyo ah, oo la cabbiri karo. Mabda'a ogaanshuhu waa: meel faaruq ah iyo cadaadis, mug mug leh oo hawo ah oo maraya dusha muraayadda iyo farqiga dusha sare ee muunadda u dhexeysa waqtiga la qaatay. Xawaareynta warqaddu waa, tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah ayey hawadu u dhex martaa, ugana soo horjeeddaa. Daabacaaddu waxay u baahan tahay warqad leh jilicsanaan dhexdhexaad ah, jilicsanaan sare, dhibic yar ayaa si daacad ah u soo saari doonta, laakiin daabacaadda oo dhammaystiran waa inay fiiro gaar ah u yeelataa si looga hortago dhabar dhabarku. Haddii jilicsanaanta warqaddu yar tahay, cadaadiska daabacaadda ee loo baahan yahay wuu weyn yahay, isticmaalka khadku sidoo kale waa weyn yahay.
6 Darajo Boodh
Waxaa loola jeedaa wasakhda dusha sare ee dhibcaha waraaqaha, midabka iyo midabka warqadda waxaa jira farqi muuqda. Darajada Boodhka waa cabbiraadda wasakhda ku jirta warqadda, oo lagu muujiyey tirada meelaha boorka ah ee ku jira xaddi gaar ah halkii mitir laba jibbaaran ee aagga warqadda ah. Boorka waraaqaha ayaa sarreeya, daabacaadda khad, dhibic soo saarista dhibicdu waa liidataa, dhibco wasakh ah ayaa saameeya quruxda sheyga.
7 Darajo Qiyaas
Caadi ahaan dusha sare ee warqadda warqadda wax lagu qoro, warqadda dahaadhka ah iyo xaashida wax lagu duubo waxaa lagu sameeyaa iyadoo la qiyaasayo lakabka difaaca ee leh caabbinta biyaha. Sida loo dalbado cabbiraadda, qalinka duck-ka ee inta badan la isticmaalo ee lagu rusheeyo khad gaar ah oo caadi ah dhowr ilbiriqsi gudahood, ku sawir xariiq warqadda, eeg ballaca ugu badan ee aan faafintiisa, awood la'aanta, unugga waa mm. Cabirka dusha sare ee waraaqaha ayaa sarreeya, daabacaadda dhalaalka lakabka khadku wuu sareeyaa, isticmaalka khadkuna wuu yar yahay.
Waa awooda warqad si ay u nuugto khadadka. Jilicsanaan, cabirida warqad wanaagsan, nuugista khadku way daciif tahay, lakabka khadkuna wuu gaabiyaa qunyar, waana sahlan tahay in lagu dhajiyo daabacaadda wasakhda ah On lid ku ah, nuugista khadku waa mid xoogan, daabacaadu way fududahay in la qalajiyo.
Waxay loola jeedaa jihada abaabulka ururinta warqadda. Marka la sameynayo sameynta warqadda, fiber-ka wuxuu ku socdaa jihada dheer ee mashiinka warqadda ah. Waxaa lagu aqoonsan karaa xagasha fiiqan ee calaamadaha saafiga ah. Gawaarida toosan waa u gudub Qiimaha qallooca ee daabacaadda hadhuudhka waraaqda dhaadheer ayaa yar. In geeddi-socodka daabacaadda hadhuudhka waraaqda gudbinta ah, kala duwanaanshaha ballaadhintu wuu ballaadhan yahay, oo xoogga siligga iyo heerka ilmada ayaa liita.
10 Heerka Ballaarinta
Waxay loola jeedaa warqadda nuugista qoyaanka ama qoyaan luminta ka dib cabbirka kala duwanaanta. Jirka jilicsan ee xajmiga xaashida, xajmiga hoose, ayaa sare u qaadaya heerka ballaarinta warqadda; Taa bedelkeeda, hoos u dhig heerka qiyaasta. Intaa waxaa dheer, jilicsanaanta, qiyaasta waraaqda wanaagsan, heerka ballaadhintiisa ayaa yar. Sida warqad laba-dhinac leh oo dahaadhan, kaarka dhalada iyo warqad A-dejin ah, iwm.
Guud ahaan, waraaqda khafiifka ah ee aan adkeynin, ayaa inta badan la neefsan doonaa. Halbeegga awoodda neefsigu waa ml / min (mililitir daqiiqaddii) ama s / 100ml (ilbiriqsi / 100ml), taas oo loola jeedo xaddiga hawo ee warqadda ka gudubtay 1 daqiiqo ama waqtiga loo baahan yahay in la maro 100ml oo hawo ah. Waraaqda leh hawo ballaadhan ayaa u nugul laba nuugista waraaqda ee habka daabacaadda.
12 Shahaadada Cad
Waxay loola jeedaa dhalaalka warqadda, haddii dhammaan iftiinka ka muuqda warqadda, isha qaawan waxay arki kartaa taas oo cad. Go'aaminta caddaanka warqadda, sida caadiga ah caddaanka magnesium oxide waa 100% heer ahaan, ku qaado muunadda warqadda shucaaca iftiinka buluugga ah, caddaanka milicsiga yar ayaa xun. Mitir cad oo sawir qaade ah ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu cabiro caddaanka. Cutubyada caddaanku waa boqolkiiba 11. Warqad caddeyn sare ah, khad daabacan ayaa umuuqda mid mugdi ah, oo si fudud wax looga soo saari karo iyadoo la adeegsanayo ifafaalaha.
13 Hore iyo gadaal
Samaynta waraaqaha, saxarka waxaa loo qaabeeyey miirayn iyo fuuqbax iyadoo loo hoggaansamayo mesh bir ah. Sidan oo kale, maaddaama dhinaca shabaqa ay ugu lumayaan fiilooyin wanaagsan iyo buuxiyayaal biyo ah, sidaas darteedna looga tagayo astaamaha saafiga ah, dusha sare ee xaashidu way ka sii dhumuc weyn tahay. Oo dhinaca kale ee aan shabaqa lahayn ayaa ka fiican. Jilicsan, sidaa darteed warqaddu waxay sameysaa farqi u dhexeeya labada dhinac, in kasta oo soosaarka qalajinta, iftiinka cadaadiska, weli waxaa jira kala duwanaansho u dhexeeya labada dhinac. Dhaldhalaalka warqaddu wuu ka duwan yahay, taas oo si toos ah u saameysa nuugista khadka iyo tayada alaabada daabacaadda. Haddii nidaamka waraaqaha loo adeegsado daabacaadda warqadda leh dhinaca dambe ee qaro weyn, saxanka xiran ayaa si weyn loo kordhin doonaa. Wejiga hore ee cadaadiska daabacaadda warqaddu waa iftiin, isticmaalka khadku wuu ka yar yahay.